Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.2.4 mikisaka
Mponina mandresy, fampiasana mandresy, ary ny rafitra mandresy ataovy sarotra ny mampiasa loharanom-baovao lehibe angon-drakitra mba hianatra lavitra ezaka fironana.
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe ny tahirin-kevitra lehibe maro loharanom-baovao ireo fa manangona tahirin-kevitra rehefa mandeha ny fotoana. Ara-tsosialy ny mpahay siansa hoe ny karazan-ny-andro tahirin-kevitra, tahirin-kevitra longitudinal. Ary, mazava ho, longitudinal antontan-kevitra dia tena zava-dehibe ho fianarana fiovana. Mba reliably mandrefy fiovana, na izany aza, ny fandrefesana rafitra tsy maintsy ho mafy orina ihany. Ao ny tenin'ny mpahay fiarahamonina Otis Dudley Duncan, "raha te-mandrefy fiovana, tsy hanova ny fepetra" (Fischer 2011) .
Indrisy anefa, maro no tahirin-kevitra lehibe rafitra, indrindra raharaha rafitra izay miteraka ka nahafaka dizitaly soritra-manova ny fotoana rehetra, ny dingana izay mandresy hiantso aho. Indrindra indrindra, ireo rafitra miova amin'ny fomba telo lehibe: mponina mandresy (fiovan'ny iza no mampiasa azy), fitondran-tena mandresy (fiovana eo amin'ny fomba ny olona no mampiasa azy ireo), ary ny rafitra mandresy (fiovana eo amin'ny rafitra ihany). Ny telo loharanom-mandresy midika fa misy fitrangan-javatra ao nomerika soritry antontan-kevitra mety ho vokatry ny fiovana manan-danja eto amin'izao tontolo izao, na ny mety ho vokatry ny sasany amin'ny teny mandresy.
Ny voalohany fototry ny mandresy-mponina mandresy-dia izay mampiasa ny rafitra, ary izany dia miova amin'ny ela-potoana kirany sy ny fotoana fohy-kirany. Ohatra, tamin'ny 2008 mba hanolotra ny taona eo ho eo ny olona ao amin'ny media sosialy nitombo. Ankoatra ireo maharitra fironana, ny olona mampiasa ny rafitra amin'ny fotoana rehetra miovaova. Ohatra, nandritra ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana ny 2012 ny ohatry ny bitsika momba ny politika izay nosoratan'ny vehivavy fluctuated isan'andro (Diaz et al. 2016) . Noho izany, inona no mety hiseho ho fiovana eo amin'ny toe-po amin'ny Twitter-tena fotsiny andininy mety ho fiovana eo izay miresaka amin'ny fotoana rehetra.
Ankoatra ny fiovan'ny izay mampiasa ny rafitra, misy ihany koa ny fiovana eo amin'ny fomba ampiasaina ny rafitra. Ohatra, nandritra ny hetsi-panoherana Occupy Gezi Park tany Istanbul, Torkia tamin'ny 2013 mpanao fihetsiketsehana nanova ny fampiasana ny tenifototra ho toy ny hetsi-panoherana nivoatra. Toy izao ny fomba Zeynep Tufekci (2014) namariparitra ny mandresy, izay izy dia afaka mamantatra, satria izy nitandrina ny fitondran-tena ao amin'ny Twitter ary teo amin'ny tany;
"Fa inona no nitranga dia ny hoe raha vao lasa ny hetsi-panoherana ny tantara indrindra, maro ny olona. . . nampiasa ny tenifototra intsony afa-tsy ny hisarika ny saina ho amin'ny toe-javatra vaovao. . .. Raha nanohy ny hetsi-panoherana, ary na dia nihamafy, ny tenifototra maty teo. Tafatafa nanambara noho izany antony roa. Voalohany, indray mandeha nahalala ny olona rehetra ny lohahevitra, ny tenifototra avy hatrany dia ilaina sy nandanilany vola eo amin'ny toetra-voafetra sehatra Twitter. Faharoa, tenifototra hita ihany no ho ilaina ny hisarihana ny saina amin'ny lohahevitra iray manokana, fa tsy noho ny miresaka momba azy io. "
Noho izany, mpikaroka izay nianatra ny hetsi-panoherana amin'ny alalan'ny fandinihana ireo bitsika miaraka amin'ny hetsi-panoherana-mifandray tenifototra mety hanana heviny diso ny zava-nitranga noho io fihetsika mandresy. Ohatra, mety mino izy ireo fa ny momba ny hetsi-panoherana izany Nihena ela be talohan'ny tena nihena.
Ny fahatelo dia karazana rafitra mandresy mandresy. Amin'ity tranga ity, dia tsy ny olona na ny fitondran-tena miova miovaova, fa ny rafitra niova mihitsy. Ohatra, rehefa mandeha ny fotoana Facebook nitombo ny fari-satan'ny ny halavan'ny fanavaozam-baovao. Araka izany, misy longitudinal fianarana ny sata vaovao dia ho mora ny asa tanana nahatonga izany fiovana. System mandresy Mifandray akaiky amin'ny olana atao hoe algorithmic mampifangaro izay mitodika ankehitriny.